Atụmatụ i kwesịrị ịma banyere Spotify akụkọ ihe mere eme
Scrolling ka akụkọ ihe mere nke tracks i gere ntị dị iche iche mmetụta niile ọnụ. Na-ege ntị ndị tracks ndị bụ gị ọkacha mmasị bụ fun. Were ya na ị nọ na-ege a track na amasị gị na ya dị nnọọ ukwuu ma adịghị echeta aha nke track, ma ọ bụ ga-enwe ike-echeta ya ruo ogologo oge. Gịnị na-eme, olee otú ị na-ndekọ nke ndị tracks ??
Ugbu a ihe ngwọta a bụ akụkọ ọrụ. Ọ bụ nnọọ a bara uru echiche maka ihe ọ bụla ọrụ. Dị nnọọ ka unu nwere ike na-ndekọ nke gị nchọgharị akụkọ ihe mere na ihe nchọgharị gị, ị nwere ike Chọpụta gị music ndia.
Ma, olee otú ị pụrụ nweta akụkọ ihe mere eme na Spotify, e nwere ụzọ dị mfe ime otú ahụ. Dị nnọọ na-eso nzọụkwụ na i nwere ike mfe isochi akụkọ ihe mere eme na ịgbakwunye egwu gị playlist.
1. Ebee bụ akụkọ atụmatụ
2. Olee otú igwu egwu egwu si Spotify akụkọ ihe mere eme? / A>
3. Olee otú ị pụrụ ọcha akụkọ ihe mere eme?
Akụkọ ihe mere eme mma bụ kpọmkwem maka desktọọpụ ọrụ na a pụrụ inweta mfe mgbe gam akporo na iOS ọrụ ọ bụ a ọjọọ ozi ọma n'ihi na ya adịghị kpọmkwem ma jikọtara ya na gị Last.fm ma ọ bụ Facebook akaụntụ. N'ihi ya iji nweta gị playback akụkọ ihe mere eme ị na-chọrọ gaa na akaụntụ ngalaba, E nwere ike ịhụ ihe ndị mere nhọrọ. Ọ bụ ezie na akụkọ ihe mere eme bụ kpọmkwem dị na handsets ọnwa ole na ole gara aga. Ma, ya na-adịbeghị anya mmelite, na e wepụrụ na a na-atụle a oghom maka update. Ugbu a ịhụ akụkọ ihe mere eme na gị desktop,
: Hover gị òké pointer n'akụkụ aka nri gị ákwà (n'ihi na ndị ọhụrụ version. Iji ekpe maka ndị okenye na nsụgharị), ị ga-ahụ kwụ n'ahịrị menu. Pịa akara ngosi.
: Ị pụrụ ịhụ ihe mere eme nhọrọ ke ndepụta.
: Pịa na nhọrọ na akụkọ ihe mere eme ga-mara. Ugbu a, i nwere ike na-ege ntị songs, tụkwasịkwa ha gị playlist zere niile a nsogbu.
Ị pụrụ ịchọ na-agagharị site na akụkọ ihe mere eme naanị maka na-arụsi ọrụ nnọkọ. Na usoro egwu niile na-egwuri na ọ bụ naanị nwere ike hụrụ na ihe ndia. Ozugbo ị wepuÚ Spotify ngwa, ndị cache data na ndekọ nwetaghachi ume na ya mere ọ dịghị akụkọ ihe mere eme na aga sessions maka gị ohere.
Ọ bụrụ na ekwentị ọrụ chọrọ ka ịnweta ha music ndia, ha nwere ike ime ya site na ịnweta akaụntụ ha na PC na nke a ga-eji nke kwụ n'ahịrị na akụkọ ihe mere eme menu maka ojiji na i nwere ike n'ihu na n'elu kwuru banyere usoro.
2. Olee otú na-egwu egwu si Spotify akụkọ ihe mere eme?
Nanị ịnweta Spotify akụkọ ihe mere eme ngalaba na họrọ track na ị chọrọ na-egwu.
The track ga-amalite na-akpọ. Ọ bụrụ na ndị track bụ ọkacha mmasị gị, ma ọ bụ na ị chọrọ chekwaa ma ọ bụ tinye ya na gị playlist, họrọ 'tinye Playlist' akara ngosi na ịgbakwunye track gị nhọrọ playlist.
I nwekwara ike họrọ multiple egwu na-etolite ọhụrụ playlist n'ihi na ndị a ọkacha mmasị. Ọhụrụ a playlist nwere ike zọpụta ma na ị pụrụ ịnụ ụtọ ndị niile egwu na ị ga-Agbaghara ma ọ bụrụ na akụkọ ihe mere eme ọrụ ga-e anọghị.
Biko mara na play akụkọ ihe mere eme nwere ike inweta maka-arụsi ọrụ ike nnọkọ naanị. Ị nwere ike na-esiteghị mbụ track ndia.
Mgbe ụfọdụ ọ ga-mere na ị na-egwu a track, ma na-adịghị amasị ya, n'ihi ya ị na-agbanwe music. Ma Spotify akụkọ ihe mere eme dere niile na-egwuri music ndia, si otú ezie na ị gbanwere track n'ihi ma ọ na-adịghị amasị ya, ọ ga-adị ugbu a akụkọ ihe mere eme. Ugbu a, mgbe ị ga-pịgharịa akụkọ ihe mere eme-aga site na-egwuri egwu, nke a ga-abụ dị. Ga-amasị gị wepụ track si akụkọ ihe mere eme ??
E nweghị dị mma ma ọ bụ nhọrọ dị na Spotify wepụ tracks si akụkọ ihe mere eme, ma naanị mara ụzọ ikpochapụ akụkọ ihe mere eme na-akwụsị ndị na-arụsi ọrụ nnọkọ na Malitegharịa ekwentị ngwa. Nke a ga-ikpochapụ al aga na ndia, ma ị nwekwara ike ọnwụ ihe ndekọ nke songs nwere ike mmasị nke akụkọ ihe mere eme.
> Resource> Spotify> Atụmatụ I Kwesịrị Ịmara Banyere Spotify History